Mogadishu Journal » Dowladdaha Caalamka oo ka hadlay Qaraxyadii ka dhacay Muqdisho
Dowladdaha Caalamka oo ka hadlay Qaraxyadii ka dhacay Muqdisho
Mjournal :-Qaar ka mid ah dowladdaha iyo Ururadda Caalamiga ah ayaa si kulul u cambaareeyay Qaraxyadii shalay lagu weeraray xarumaha Wasaaraddaha Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka.
Dowladdaha Carabta,kuwa Yurub, iyo dalka Mareykanka ayaa sheegay in Qaraxaasi ay aad uga naxeen,islamarkaana uu kusoo aaday xilli Amniga Caasimadda uu soo hagaagaayay.
Dowladda Mareyanka ayaa sheegtay in ay qaadi doono tilaabo looga jawaabaayo Qaraxyaddii Al-Shabaab ee ka dhacay Muqdisho,islamarkaana ay laba jibaari doonto howlgallada dhanka cirka ah ee ay ka waddo Soomaaliya.
Sidoo kale dowladda Turkiga ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay ka caawin doonto sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadkii ay waxyeelado kasoo gaartay Qaraxyadii shalay ka dhacay Muqdisho.
Ku dhawaad 15 ruux ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen laba qarax oo shalay lagu weeraray Wasaaradaha Arrimaha Gudaha iyo Amniga ee Soomaaliya.
Labada qarrax oo loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa lagu soo xiray ayaa lala beegsaday dhismaha Otto Otto ee magaalada Muqdisho oo xarun u ah Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Wasaaradda Amniga iyo Ciidanka booliska Taraafikada ee loo yaqaano Oto Oto.
Ra’isal wasaaraha Itoobiya oo booqanaya Eritrea
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo ka degay magaalada Asmara ee dalka Eritrea
Madaxweyne Farmaajo oo booqasho shaqo ugu ambabaxay dalka Burundi by Ahmed Cali - Mon Feb 18th 13:04:05
Kheyre oo daahfuray mashruuca dhismaha Wadooyinka isku xira Muqdisho & labada Shabeelle+Sawirro by Ahmed Cali - Mon Feb 18th 12:15:22
Ganacsatada qaadka Kenya oo ku hanjabay joojinta jaadka ay keeneen Soomaaliya by Ahmed Cali - Mon Feb 18th 10:07:24
Madaxweyne Farmaajo oo qaabilay Safiirkii Soomaaliya ee Kenya by Ahmed Cali - Mon Feb 18th 9:47:26
Kenya oo dalbatay in ay dowladda Soomaaliya fuliso saddex sharuudood by Ahmed Cali - Mon Feb 18th 5:45:47